Hiob 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Hiob anoyi (1-35)
Onipa dasani rentumi ne Onyankopɔn ntwe manso (2-4)
‘Onyankopɔn yɛ nneɛma a ɛboro yɛn ntease so’ (10)
Obiara nni hɔ a obetumi ne Onyankopɔn ayiyi nsɛm ano (32)
9 Ɛnna Hiob kae sɛ: 2 “Ampa ara, minim sɛ saa na ɛte. Nanso ɛbɛyɛ dɛn na onipa dasani atumi ne Onyankopɔn adi asɛm na wadi bem?+ 3 Sɛ obi yɛ n’adwene sɛ ɔne No bɛtwe manso,*+Na Obisa no nsɛm apem a, ɔrentumi mmua baako mpo. 4 Ɔyɛ koma mu nyansafo, na ne tumi ne n’ahoɔden nni ano.+ Hena na obetumi ne no adi asi na asi no yiye?+ 5 Otutu mmepɔw* bere a obiara nhu;Otutu gu wɔ n’abufuw mu. 6 Ɔwosow asaase fi baabi a ɛwɔ,Na ne nnyinaso hinhim.+ 7 Ɔkasa kyerɛ owia sɛ ɛmmmɔ,Na ɔkata nsoromma ani na anhyerɛn;+ 8 Ɔno nko ara na ɔtrɛw ɔsoro mu,+Na otiatia ɛpo asorɔkye akɛse so.+ 9 Ɔno na ɔyɛɛ Ayis nsorommakuw,* Kesil nsorommakuw,* ne Kima nsorommakuw,*+Na ɔno na ɔyɛɛ nsorommakuw a ɛwɔ anaafo fam wim no;* 10 Ɔyɛ nneɛma akɛseakɛse ne nneɛma a ɛboro yɛn ntease so,+ Na ɔyɛ anwonwade bebree.+ 11 Ɔnam me ho a, minhu no;Otwa mu wɔ me ho a, minhu sɛ ɛyɛ ɔno. 12 Sɛ ohwim biribi a, hena na obetumi asiw no kwan? Hena na obetumi aka akyerɛ no sɛ, ‘Dɛn na woreyɛ yi?’+ 13 Onyankopɔn renka n’abufuw nhyɛ;+Rahab* aboafo mpo+ bɛkotow no. 14 Ɛnde sɛ merema no mmuae a,Ɛsɛ sɛ mehwɛ me kasa yiye paa! 15 Sɛ m’asɛm yɛ dɛ mpo a, meremma no mmuae.+ Nea metumi ayɛ ara ne sɛ mɛpa me temmufo* no kyɛw sɛ onhu me mmɔbɔ. 16 Sɛ mefrɛ no a, obegye me so anaa? Minnye nni sɛ obetie me, 17 Efisɛ ɔde ahum twiw fa me soNa ɔma me ho akuru dɔɔso kɛkɛ.+ 18 Ɔmma minnya ahome mpo;Nneɛma a ɛyɛ yaw nko ara na ɔde puapua me. 19 Yɛreka ahoɔden a, ɔno ne otumfo.+ Na yɛreka atɛntrenee a, n’asɛm ne sɛ: ‘Hena na obetumi afrɛ me sɛ mimmeyi m’ano?’ 20 Sɛ midi bem mpo a, anka m’ankasa m’ano na ebebu me fɔ;Sɛ mekɔ so ma m’abrabɔ di mu* mpo a, obebu me fɔ.* 21 Sɛ mekɔ so ma m’abrabɔ di mu mpo a,* minnim nea ɛbɛto me;*Me nkwa mpo afono me.* 22 Ne nyinaa, ade koro yi ara. Ɛno nti na mereka sɛ,‘Ɔsɛe nea ne ho nni asɛm* ne ɔbɔnefo nyinaa fra.’ 23 Sɛ nsu yiri bu fa so kum nnipa mpofirim a,Ɔbɛserew wɔn a wɔn ho nni asɛm no, amanehunu a ato wɔn no nti. 24 Ɔde asaase ahyɛ ɔbɔnefo nsa;+Ɔkata asaase so atemmufo ani.* Sɛ ɛnyɛ ɔno a, ɛnde ɛyɛ hena? 25 Seesei me nna twam ntɛm sen ommirikatufo;+Eguan kɔ, na enhu adepa. 26 Ɛsen kɔ te sɛ akorow a wɔde demmire* ayɛ,Ɛte sɛ ɔkɔre a ɔtow hoo kyere aboa. 27 Sɛ meka sɛ, ‘Mɛma me werɛ afi me haw,Mɛtew m’anim, na mama m’ani agye’ a, 28 Ɛyaw a merefa mu no nyinaa nti, mɛkɔ so ara abɔ hu,+Na minim sɛ woremmu me bem. 29 Meyɛ dɛn ara a medi fɔ.* Enti adɛn nti na ɛsɛ sɛ mebrɛ gu?+ 30 Sɛ mede sukyerɛmma a anan ayɛ sɛ nsu guare,Na mede samina* hohoro me nsa mpo a,+ 31 Anka wode me bewura amoa a atɛkyɛ wom mu,Sɛnea ɛbɛyɛ a me ho bɛyɛ me ntaade mpo tan. 32 Efisɛ ɔnyɛ onipa te sɛ me na me ne no ayiyi nsɛm ano,Anaa me ne no akɔ asɛnnibea akodi asɛm.+ 33 Obiara nni hɔ a obedi yɛn ntam asɛm,*Na wayɛ yɛn temmufo.* 34 Sɛ wanhwe me bio,*Na wamma ne ho hu anhunahuna me a,+ 35 Ɛnde me ne no bɛkasa a merensuro no,Efisɛ menyɛ obi a ɔde ehu kasa.
^ Anaa “ɔde No bɛkɔ asɛnnibea.”
^ Anaa “Oyi mmepɔw fi hɔ.”
^ Anaa “Nsorommasɔn.” Ɛbɛyɛ sɛ ɛno ne Osisi Kɛse (Ursa Kɛse) nsorommakuw no.
^ Anaa “Nyɛnkrɛnte.” Ɛbɛyɛ sɛ ɛno ne Orion nsorommakuw no.
^ Anaa “Akokɔbaatan-ne-ne-mma.” Ɛbɛyɛ sɛ ɛno ne Pleiades nsoromma a ɛwɔ Taurus nsorommakuw mu no.
^ Nt., “anaafo fam mpia mu.”
^ Ɛbɛyɛ sɛ ɛyɛ ɛpo mu aboa kɛse bi.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “nea me ne no anya asɛm.”
^ Anaa “Sɛ me ho nni asɛm; Sɛ midi bem.”
^ Nt., “obebu me ɔkɔntɔnkyeni.”
^ Anaa “minnim me kra.”
^ Anaa “Mempɛ me nkwa.”
^ Anaa “nea n’abrabɔ di mu.”
^ Nt., “anim.”
^ Nt., “wobebu me ɔbɔnefo.”
^ Anaa “ɔbɛyɛ yɛn ntamgyinafo.”
^ Nt., “Na ɔde ne nsa agu yɛn baanu so.”
^ Nt., “Sɛ oyi n’abaa fi me so.”